Home	News	Articles	Features	Previews	Reviews	Fan Zone	Fan Posts	Fan Interviews	ယူနိုက်တက်နှင့်အတူ ဆက်လက်လက်တွဲရင်ဆိုင်သွားမယ့် #လင်ဒီဂတ်
Created on Tuesday, 07 January 2014 11:46 မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းဟာ လက်ရှိအခြေအနေမှာ ဆိုးဝါးတဲ့ရလဒ်များနှင့် ဆက်တိုက်ကြုံတွေ့ခဲ့ပေမယ့် အချိန်မှီ ပြန်လည်နိုးထ စိန်ခေါ်နိုင်စွမ်း ရှိနေဆဲဟု အသင်း၏ ဒိန်းမတ်ဂိုးသမား အင်ဒီလင်ဒီဂတ်က အခိုင်အမာယုံကြည်ထားပါတယ်။
Read more: ယူနိုက်တက်နှင့်အတူ ဆက်လက်လက်တွဲရင်ဆိုင်သွားမယ့် #လင်ဒီဂတ်
Created on Thursday, 02 January 2014 06:59 မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းဟာ အသက်(၁၇)နှစ်အရွယ် ခရိုအေးရှား လူငယ်တိုက်စစ်မှူး ရောဘတ်မူရစ်အား ပေါင်သုံးသိန်းဝန်းကျင်ဖြင့် ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ နီးစပ်နေတယ်လို့ သတင်းများက ဖော်ပြနေပါတယ်။
Read more: အပြောင်းအရွေ့သတင်းများ
ကွင်းလယ်ဒိုင်ဟာ လူကြားမကောင်းတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ လုပ်ခဲ့တယ် #ဒေးဗစ်မိုယက်စ်
Created on Thursday, 02 January 2014 06:45 မနေ့က ကစားခဲ့သည့် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွင် ကွင်းလယ်ဒိုင် ဟောင်းဝဒ်ဝဘ်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် လူကြားမကောင်းလောက်အောင် နုံချာခဲ့တယ်လို့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ မန်နေဂျာ ဒေးဗစ်မိုယက်စ်က ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။
Read more: ကွင်းလယ်ဒိုင်ဟာ လူကြားမကောင်းတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ လုပ်ခဲ့တယ် #ဒေးဗစ်မိုယက်စ်
Created on Sunday, 08 December 2013 07:03 အာဆင်နယ်အသင်းကို အနိုင်ယူပြီးနောက် ပရီးမီးယားလိဂ် လေးပွဲဆက်တိုက် နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပေမယ့် သူတို့ရဲ့ အကောင်းဆုံး ပုံစံကို ပြသနိုင်ဖို့အတွက် ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ နောက်ခံလူ ဂျွန်နီအီဗန်က ထုတ်ဖော်ကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။
Read more: ပေးဆပ်နိုင်သမျှအကုန်ပေးဆပ်ကစားပြရပါ့မယ် ဆိုတဲ့အီဗန်
Created on Sunday, 08 December 2013 07:01 စနေနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်မှာ ယိုဟန်ကဘာယီရဲ့ သွင်းဂိုးဖြင့် နယူးကာဆယ် အသင်းအား ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ မန်နေဂျာ ဒေးဗစ်မိုယက်စ်က အသင်းရဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကို ပရိသက်တွေ အနေဖြင့် နားလည်ပေးနိုင်မယ်လို့ ယူဆကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
Read more: မိုယက်စ်ငြင်းဆိုခဲ့တဲ့ ဗန်ပါစီအပြောင်းအရွေ့ကောလဟာလ
ရွန်နီရဲ့ ပေါက်ကွဲတတ်မှုအပေါ် ကျေနပ်နေတဲ့ မိုယက်စ်
ချန်ပီယံဘွဲ့ကို ကာကွယ်နိုင်မှာပါ -ရွိုင်ယန်ဂစ်
လေ့ကျင့်ကွင်း မဆင်းနိုင်သေးသည့် ရော်ဘင်ဗန်ပါစီ
ဗန်ပါစီ၊ ရော်ဘင်နှင့် အိုဇေးလ်တို့ကို ချီးကျူးခဲ့သည့် မက်စီ
ကစားသမားတွေရဲ့ ဒဏ်ရာအခြေအနေ ရှင်းပြခဲ့တဲ့ မိုယက်စ်
Start Prev 1234567 8910 Next End Page2of 169	Latest News မာတာနဲ့ စကားစမြည်
ကျွန်တော် နဲ့ အိုးထရက်ဖို့ကွင်းကြီးထဲ သို့ ပထမဆုံး ခရီး
ကံဆိုးမှုများနဲ့ယူနိုက်တက်ရဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ အဖွင့်ပွဲစဉ်
ဂျူအန်မာတာ၏ ကစားသမားဘ၀ ကောက်ကြောင်း
ကိုယ်ချစ်တဲ့အသင်းကို ဘယ်လို အားပေးကြမလဲ
ယူနိုက်တက်ရဲ့ပုံရိပ် ကျဆင်းမသွားပါဘူး ဆိုတဲ့ မိုယက်စ်
ယူနိုက်တက်ကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့ အန်ဒါဆင်
တစ်လတာအကောင်းဆုံး မန်နေဂျာဆုအတွက် ဇကာတင်စာရင်း ပါလာသည့် #ဒေးဗစ်မိုယက်စ်
နဂိုခြေစွမ်း ပြသနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ဆာမူရိုင်း
ယူနိုက်တက်နှင့်အတူ ဆက်လက်လက်တွဲရင်ဆိုင်သွားမယ့် #လင်ဒီဂတ်
Copyright © 2015 Myanmar Manchester United. All Rights Reserved. Designed by SmartAddons.Com